Rooble oo ka hor tagay qorshe uu damacsanaa Fahad Yaasiin | KEYDMEDIA ENGLISH
Rooble oo ka hor tagay qorshe uu damacsanaa Fahad Yaasiin
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal, ayaa soo dhaweeyay kala diriddii Guddiyada doorashooyinka ee uu sameeyay Ra’iisul Wasaaraha dalka, taasoo god mugdi ah ku sii ridday rajadii Fahad Yaasiin.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa fashiliyay qorshe uu Fahad Yaasiin ku doonayay in maanta loo fasaxo kursiga HOP086, kaas oo Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ee FEIT, natiijada doorashadiisa ka soo qaadeen wax kama jiraan.
Labadii maalin ee la soo dhaafay, wakiillo ka socday Fahad ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid ah xubnaha Guddiga FEIT, waxayna dhinacyadu isku af-garteen in la fasaxo kursiga, isla-markaana Fahad maanta ku soo laabto dalka, si deg deg ahna loo guddoonsiiyo Shahaadada iyo aqoonsiga Xildhibaannimo.
Sida ay ilo loo qaateen ah xaqiijiyeen, wakiillada ka socday Fahad ayaa waday, lacag gaareysa labo milyan oo doolar, taasoo ay dowladda Qatar ugu tala gashay in loo adeegsado fasixidda kursiga HOP086, kaasoo uu bishii Feberaayo ee sanadkaan Fahad Yaasiin ka soo boobay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Hayeeshee, Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa si buuxda u fashilyay qorshahaas, wuxuuna kala diray dhamaan saddex heer ee Guddiyada Doorashooyinka, isagoo xusay in heshiisyadii iyo habrascyadii doorashadu qeexayeen in muddo Howleedka Guddiyada Doorashooyinka ay ku egyihiin soo gaba gabeynta doorashada labada Aqal ee BJFS.
“Ra’iisul Wasaaraha XFS, isaga oo uga mahadcelinaya dhammaan guddiyada kala duwan ee Doorashooyinka dadban waajib gudashadoodi Qaran, ayaa waxa uu si rasmi ah u kala diray dhammaan Guddiyada Doorashooyinka 2020/22, iyadoo xil-gudashadoodu ku ekeyd doorashada labada Aqal”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska Rooble.
Wuxuu sheegay in kuraasta Baarlamaanka ee guddiyada go'aamiyeen in dib loo soo doorto ama Banaanaada sabab kasta ha ku dhacdee, ay doorashadooda maamuli doonaan, Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyaga oo raacaya isla habracyadii horay loogu soo doortay Baarkamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda FS.
Intaas kadib, Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ee FEIT, ayaa si buuxda u soo dhaweeyay kala diridda uu sameeyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxayna uga mahad celiyeen hagistiisii iyo garab istaaggii uu muujiyey waqtiyadii adkaa ee doorashada oo aan la’aantiis la dhaqaajin kareen, sida ay hadalka u dhigeen.
Sida ay ku doodayaan dadka u dhuun duleela siyaasadda Soomaalya, gaar ahaan arrimaha Baarlamaanka, sababta dowladda Qatar, malaayiinta dollar ugu bixineyso in xubno ka tirsan guddiga waqtigiisu dhamaaday, ay fasaxaan HOP086, ayaa ah, in afarta sano ee soo aaddan uu Fahad wakiil uga ahaado fowdo siyaasadeed iyo mooshinno Baarlamaan.
Fahad Yaasiin, wuxuu hore ugu soo fashilmay in Maxakamadda sare u fasaxdo kursiga, waxaa u shaqeyn waayay qaylo dhaantii Yuusuf Dabageed iyo Guddiga doorshooyinka heer – Hirshabeelle, wuxuu hore ugu hunguubay waddo kasta oo kursiga loogu fasixi lahaa, tallaabadaan ayaana ahayd middii ugu danbeysay.
Fahad waa eedeysane dacwo ka taallo Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida, wuxuuna ku eedeysan yahay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah sarkaalad ka tirsaneyd NISA, taas oo ku maqan gacantiisa tan iyo bartamihii sanadkii hore, halka sidoo kale RW Rooble, la xariiriyay khaarijintii AUN, Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi.